नयाँ वर्षमा के गर्दै छ कांग्रेस ? यसो भन्छन् देउवा - Sabal Post
नयाँ वर्षमा के गर्दै छ कांग्रेस ? यसो भन्छन् देउवा
पोखरा – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नव वर्ष २०७६ को शुभारम्भ पार्टी एकताका रुपमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।नेपाल महिला सङ्घद्वारा शुक्रबार नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा उनले नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गरे । साथै देउवाले नयाँ वर्षमा पार्टीलाई एकताबद्द गराएर अगाडि बढ्ने याेजना सुनाए ।
उनले पोखराबाट पार्टी एकताको सन्देश जनताका माझमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कास्कीमा आगामी दिनमा संसदीय उपनिर्वाचन हुने भएकाले पार्टीलाई ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्ष २०७६ उपलब्धिमूलक एवं मंगलमय होस् भनी कामना व्यक्त गरे ।
आगामी १० महिनापछि पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गरी काँचुली फेनुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभए कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति हुने बताए । उनले नेपाल महिला सङ्घलाई पार्टीको संगठनलाई बलियो बनाउन टोल–टोलमा समिति गठन गर्न आह्वान गरे । उक्त कार्यक्रम सङ्घकी पोखरा नगर समिति सभापति माया बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
सागको प्रत्यक्ष प्रसारण नक्षत्र न्युजले गर्ने
लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानको क्रममै १६ उजुरी